Ciidamada dowladda ee laga saaray Dhuusa Mareeb oo gaaray degmada Cadaado – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee saaka laga saaray magaalada Dhuusa Mareeb ayaa maanta barqadii gaaray degmada Cadaado, halkaasoo uu ka socdo shirka maamul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Sida ay sheegayaan wararka Ciidamadan oo watay gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay inay isaga baxeen fariisimo ay ku lahaayeen gudaha iyo daafaha Dhuusa Mareeb, kadib markii ay ciidamada Ahlusuna ay ka qabsadeen.
Wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah gaadiidkii dagaalka ee ay wateen ciidamada uu shil galay, waxaana ku dhaawacmay ilaa afar askari oo dhaawacyadooda la dhigay Isbitaalka Cadaado.
Afhayeenka Maamulka Ximan iyo Xeeb Careys Maxamed Xaaji ayaa u sheegay mareeg.com in ciidamada oo watay ilaa 10-gaadiidka dagaalka la dejiyay meel banaanka ka ah magaalada, isla markaana ay haatan wada hadalo socdaan,
Saraakiisha ciidamada dowladda hogaaminayay ayaa sheegay in ciidankooda ay isaga soo baxeen, markii ciidanka Ahlusuna gudaha u soo galeen Dhuusa Mareeb.
Illaa iyo hadda ma khasaaraha ka dhashay dagaalkii koobnaa ee saakay ka dhacay Dhuusa Mareeb, hase yeeshee Ciidamada Ahlusuna ayaa si buuxda gacanta ugu haya Dhuusa Mareeb, iyagoo ku sugan saldhigii booliska, xaruntii maamulka iyo koontaroolada laga soo galo magaalada.
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan qeyb ka mid ah magaalada Dhuusa Mareeb ayaan wax fara gelin ah ku sameyn, iyagoo xeradooda ku sugnaa.
Xaalada Dhuusa Mareeb ayaa haatan degan, waxaana sarkaal u hadlay Ahlusuna uu sheegay inay si buuxda gacanta ugu hayaan Dhuusa Mareeb, ayna aheyd meel ay horay u maamuli jireen, kulana dagaalameen Al-Shabaab.